Jereo ny tombony azo amin'ny fahazarana mandeha | Bezzia
Susana Garcia | 08/06/2021 20:00 | fanatanjahan-tena, fahasalamana
El ny fahazarana mandeha dia iray amin'ireo tena ilaina indrindra amin'ny resaka fanatanjahan-tena isan'andro ary azon'ny rehetra ampiasaina. Toa fanatanjahan-tena tsotra io nefa mitondra soa be dia be ho antsika izay mety tsy hitantsika. Raha te hanana endrika tsy misy fanatanjahan-tena na fifehezana sarotra ianao dia afaka miditra amin'ny fanatanjahantena tena lehibe indrindra, ny fahazarana mandeha.
Mandeha an-tongotra dia zavatra saika azon'ny rehetra atao isan'andro, ka fanatanjahantena tsy misy fialan-tsiny io. Manana tombony be dia be izay mahatonga antsika hisafidy azy io ho iray amin'ireo fanatanjahan-tena tsara indrindra ho an'ny rehetra. Ho fanampin'izay, azo atao izany na dia tsy manana tontolon'ny fanatanjahan-tena tsara aza isika, ka mety ho fanatanjahan-tena tsara hanombohana azy.
1 Tombony azo amin'ny fandehanana
2 Manampy amin'ny fitazomana lanja
3 Mampihena ny adin-tsaina
4 Miaro ny tonon-taolana
5 Ahoana ny fomba hanaovana ilay fahazarana vaovao
Tombony azo amin'ny fandehanana
Ny mandeha an-tongotra dia fahazarana tena tsotra izay azon'ny rehetra atao. Ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra dia ny tsy misy zavatra ilaina manokana hanaovana azy. Tsy mila mifidy akanjo ahazoana aina sy kiraro sahaza fotsiny isika. Ny kiraro amin'ity tranga ity no tena zava-dehibe indrindra, satria tsy maintsy mahazo aina izy ary manana cushion, na dia tsy voatery ho voafaritra tsara toy ny amin'ny kiraro mihazakazaka na amin'ny fanatanjahan-tena hafa aza izy io satria kely ny fiantraikany. Ho fanampin'izany, vitantsika isan'andro sy mora foana izany, tsy andoavany vola. Iray amin'ireo fanatanjahan-tena ifotony indrindra azo tanterahina izany ary izany no mahatonga antsika indraindray tsy mahatsikaritra azy io, fa tsy isalasalana fa fanatanjahantena no jerena.
Manampy amin'ny fitazomana lanja
Zava-dehibe ny fihazonana lanja mahasalama satria ny lanjanay manana tombontsoa ara-pahasalamana maro. Ratsy ny tsy fahampiana lanja, nefa koa matavy loatra, satria miaraka aminy ny olana toy ny tsy fahampian'ny fivezivezena, ny kolesterola na ny aretim-po. Ny dia an-tongotra dia fanatanjahan-tena ifotony fa raha ataontsika isan'andro isan'andro, amin'ny hafainganam-pandeha tsara, dia afaka mitazona mora foana ny lanjantsika isika. Amin'ny andro rehefa tsy te-hanao fanatanjahantena mafimafy kokoa ianao dia mandehana, satria fomba iray hafa hampihetsi-po izay tena tsotra.
Ao amin'ny fiainana isan'andro isika dia manana adin-tsaina mihangona be loatra izay tsy mahasoa, satria ity fanjakana ao amin'ny vatantsika ity dia tsy tokony halefa ara-potoana fotsiny ary ankehitriny dia miaina anaty toe-tsaina maharitra isika, izay misy vokany eo amin'ny vatantsika sy ny hery fiarovantsika. Izany no antony ilàna ny fampihenana ny adin-tsaina. Ny fandehanana isan'andro dia manampy antsika hampihena ny haavon'ny fihenjanana satria ny fanazaran-tena dia miteraka endorphins ary mampiala antsika. Izany dia mahatonga ny hery fiarovantsika hatanjaka kokoa satria tsy voakasiky ny kortisol, ilay hormonina izay afitsokay amin'ny dingana tsindry.
Miaro ny tonon-taolana
Ny fahazarana mandeha miaro manampy ny tonon-taolanasatria manamafy ny lohalika sy ny valahany. Manatanjaka ny hozatra sy ny taolana koa ny fanaovana fanatanjahan-tena, ka izany no mahasoa ny vatantsika. Ny fanatanjahan-tena antonony dia tena ilaina mba hijanonan'ny vatantsika mailaka sy hatanjaka mandritra ny taona maro. Ny fisorohana ny olana eo amin'ny fiaraha-miasa, ny hozatra ary ny taolana dia azo tanterahina amin'ny fanatanjahan-tena antonony.
Ahoana ny fomba hanaovana ilay fahazarana vaovao
Mandehana isan'andro mety ho fomba tsara hijanonana ho salama hatrany. Ny fahazarana vaovao dia tokony atao antsasak'adiny farafahakeliny hahitana ny tombony azo avy amin'izany. Tsy maintsy mandeha amin'ny hafainganam-pandeha tsara ianao hahazoanao tombony tsara indrindra, satria ny fandehanana amin'ny hafainganana dia mampitombo ny fitempon'ny fonao sy ny ezaka ataonao. Mila mahazo kiraro tsara ianao ary mitady toerana mahaliana handehanana, miovaova ny làlana. Azontsika atao ny mampiditra ny sasany amin'ny tehezan-tendrombohitra mba hahitana vokatra bebe kokoa amin'ilay fanatanjahan-tena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Tombontsoa azo amin'ny fahazarana mandeha